Pirezidaantiin duraanii Masirii Hosini Mubarek du'aan boqatan - BBC News Afaan Oromoo
Pirezidaantiin duraanii Masirii Hosini Mubarek du'aan boqatan
25 Guraandhala 2020
Madda suuraa, KHALED DESOUKI
Pirezidaantii duraanii Masirii Hosini Mubaarek
Pirezidaantiin duraanii Masirii bara 2011 humna waraanaan aangoo irraa kaafaman umurii ganna 91'n hospitaala magaalaa Kaayiroo jirutti du'aan boqatan.
Warraaqsa Masiriitti bara 2011 ka'een osoo aangoo irraa hin kaafamiin dura waggoota 30 oliif aangoo irra turaniiru.
Mubaarek Masirii fi Israal'el gidduutti nagaa buusanis uummatuma isaaniin ammoo aangoo irraa fonqolchaman.
Dhiyeenya kanas fincila Masiriitti ka'een aangoo qabatanii humna waraanaan kan irraa kaafaman dursaan paartii 'Muslim Brotherhood' Mohaammad Mursiin mana hidhaa taa'anii osoo himannaa irratti banamee ture hordofanii du'aan boqachuun isaanii ni yaadatama.
Mohaammad Mursiin dhaddacharratti erga du'anii sa'aatii muraasa booda awwaalaman
Lammiileen Masrii Al-Siisii mormuuf hiriira bahan
Hosini Mubaarek eenyu?
Mubaarek bara 1928 ganda magaalaa Kaayiroo cinatti argamtu Menofiyaa jedhamtu keessati dhalatan. Mubaarek humna waraanaa qilleensarraa ajajuun beekamu ture.
Mubaarek Suzane Mubaarek gariin lammii Biriiten irraa kan dhalatte fuudhun waliin jiraachaa turan.
Uuumatatti bahanii hin mul'atan jedhamuun kan qeeqaman pirezidaantichi waan dhugaatii fi sigaaraa jedhame akka hin fayyadamne himama.
Kana irraa kan ka'e fayyaa guutuu qabu jedhama. Sochii isportii gochuunis haa beekaman malee hojii hundumaaf, maatiifis karoora yeroo kaa'aniin ala akka hin sochoonetu dhugaa bahamaaf.
Mubaarek bara 1981 ture yeroo pirezidaantiin biyyattii Anuwaar Saadaat ajjeefaman kan aangootti dhufan.
Bulchiinsa Saadaat jalatti Mubaarek namni uummata biratti hedduu hin beekamne kun itti aanaa pirezidaantii tahuun hojjetaa turan.
Saadaat Kaayiroo agarsiisa waraanaa irratti ture hidhattota Islaamaan kan ajjeefaman.
Guyyaa sana Mubaarek pirezidaantii yeroo sanaa Saadaat cinaa taa'aa kan turan yoo tahu xiqqumaaf akka miliqantu himama.
Ergasii Mubaarek yeroo jaha yaalii ajjeechaa jalaa kan oolan yoo tahu inni akka malee sodaachisaa ture bara 1995 magaalaa Finfinneetti wal gahii Gamtaa Afrikaa hordofuuf magaalaa Finfinnee akkuma galaniin kan irratti gaggeeffame ture.
Mubaarek biyyoota Arabaa keessaa michuu dhiyoo Ameerikaa fi biyyoota Lixaa biroo tahuun beekamu.
Bulchiinsa isaanii irratti dhiibbaan yommuu gaggeeffamu filannoo biyyattii irratti mormitootni akka bilisaan hirmaatan gochuuf dirqamaniiru. Tahus kun gahaa hin turre. Warraqsi biyyattiitti ka'uun humna waraanaan aangoo irraa kaafaman.
Ergasii mormitoota ajjeesisuu fi daddabarsa maallaqaan himatamuun waggaan sadii itti murtaa'uun mana hidhaa turan. Haa tahu malee bara 2017 manni murtii ijjibbaataa Masirii akka bilisaan gadhiifaman murteessuun waggaa jaha booda mana hidhaatii bilisa bahan.
18 Waxabajjii 2019
Lammiileen Masrii pireezidaant Fattaah al-Siisii irratti mormii bahan
21 Fuulbaana 2019
Lammeechaa Girmaa waggoota 41 booda 3000m'n medaaliyaa Olompikii biyyaaf argamsiise
Sa'aatii 6 dura
''Buna malee shaampiyoonaa tahuu hin danda'u'' Siifan Hasan
'Mootummaan haalduree keenye akka fudhatuf lolaa jirra'
2 Hagayya 2021
Lola Affaari fi Somaaleen namootni hedduun ajjeefaman, hedduun buqqa'an
28 Adooleessa 2021
Xiyyaara WFP Harargeetti ooyruu jimaa keessatti kufe, namoonni argan maal himu?
'Carraa dhumaa tokko qabna, nagaa buusuuf marii biyyaalessaa qofa' - Leencoo Lataa
24 Adooleessa 2021
Laamroot Kamaal: Manni murtii galmeen qorannoo poolisii akka dhiyaatuuf ajaje
29 Adooleessa 2021
Jawaarfaa bakka hin jirretti himatni isaanii akka ilaalamu manni murtii ajaje
Duulli ijaarsa hidha Haaromsaaf baatii tokkootti $ mil. 1 walitti qabuu eegalame
27 Adooleessa 2021
Barataan duraanii Yun. Haramaayaatti hanna raawwateen hidhaan waggaa 15 itti murtaa'e
26 Adooleessa 2021
Matakkalitti haleellaa namoota gadda taa'an irratti raawwateen miidhaan qaqqabe
'Lolaa kan jirru ulaan Tigraayitti cufame akka banamuufi mootummaan haalduree keenye akka fudhatu taasisuuf'
Atileetiin Tookiyootti mo'achuun meedaaliyaa badhaafamte harka qaxxaamursuun mormite
Erdoogaan Tarkiin Itoophiyaadhaaf deeggarsa gosa kamiyyu ni taasifti jedhan
Balaliisaa xiyyaaraa bosona bineensaan guutame keessatti du’arraa hafe
Yeroo dhuma kan haaromfame: 12 Ebla 2021
Daandiin Qilleensaa Itoophiyaa loltootas ta'e meeshaa waraanaa kamiyyu Tigraayitti akka hin fe'iin hime
Jabuutiin walitti bu'insa saboota Somaaleefi Affaar biyyattii keessatti mudate balaaleeffatte
Atileet Siifan Hasan fiigicha fageenya 10,000m rikkardii addunyaa harka galfatte
Yeroo dhuma kan haaromfame: 7 Muddee 2019
Waraanni Kaaba Itoophiyaa mariin akka furamu Pirezidant Maakroon gaafatan
© 2021 BBC. Qabiyyeewwan maddawwan alaa irraa ta'aniif BBCn itti gaafatamaa miti. Gara geessituu alaatti akkaataa itti hojjennu dubbisi.